Haweeney Maraykan ah Oo Shan Qof Toogasho ku Dishay. – Heemaal News Network
Haweeney Maraykan ah Oo Shan Qof Toogasho ku Dishay.
Haweeney u dhalatay dalka Maraykanka ayaa toogasho ku dishay shan ruux kadib markii ay rasaas ku furtay xarun ay ka howlgalaysay.
Weerarkan ayaa ka dhacay goob ay ku yaalaan bakhaaro, waxaana geysatay haweenay la sheegay inay toogatay afar qof kadibna is dishay.
Illaa iyo hadda lama oga sababta weerarkan ka danbeysa, balse inta badan ayey dalkaasi Maraykanka ka dhacaan weeraro ay geystaan dad hubeysan kuwaasi oo marar badan ka dhaca goobaha shaqada, iskuulada iyo goobaha kale oo ay dadka isugu yimaadaan.
Goobta uu weerarkan ka dhacay ayaa ah nawaaxiga xarunta Rite Aid distribution centre oo ku taal magaalada Aberdeen oo 56km waqooyiga uga beegan magaalada Baltimore.
Weerarada dalka Maraykanka ka dhaca ayaa waxaa badanaa geysta rag, waxaana la sheegay in haweeneyda dilka geysatay ay si sharci ah u lahayd hubka ay u adeegsatay toogashada.
Saddex qof ayaa ku dhaawacmay weerar Arbacadii ka dhacay gobalka Pennsylvania, halkaasi oo nin hubeysan rasaas ooda uga qaaday dad badan oo ku sugnaa goob Maxkamada ah, booliiska ayaa toogasho ku dilay ninka weerarkaasi geystay oo lagu magacaabay Patrick Dowdell.
Isla maalinimadii Arbacadii ayaa weerar kale oo ka dhacay xarun ganacsi oo ku taal magaalada Madison ee gobalka Wisconsin, booliiska ayaa sidoo kale ninka weerarkaasi geystay toogasho ku dilay. Ugu yaraan 4 ruux ayaa ku dhaawacmay weerarka ka dhacay gobalka Wisconsin.
Xildhibaan ka Tirsan Baarlamaanka Somaliand Oo Sheegay In Madaxweyne Gaas Iman Karo Laascaanood.
Mas’uuliyiin Hore Oo Cambaareeyay Dil Arxan Darro ah Oo ka Dhacay Muqdisho.
Sida ay masuuliyiintu sheegeen Waxaa sare u sii kacday dadka ku dhintay dab ka kacaya gobolka California ee dalka Maraykanka iyadoo gaartay 48 ruux, in ka badan 200 kalena wali la la’yahay. Lix ruux oo […]
Deegaannada la aaminsan yahay in ay ku xoogan yihiin Al Shabaab ayaa lagu dilay 37 ka tirsan dagaalyahanada Alshaab duqaymo dhinaca cirka oo ay ciidamada Maraykanka iyo kuwa Soomaaliya ka fuliyeen deegaanno hoostaga degmada Xarardheere […]
Maraykanka Oo Beeniyay In Uu Safaaradiisa U soo Rarayo Magaalada Muqdisho.
Maraykanka ayaa beeniyay inuu safaaradiisa Soomaaliya ee degen magaalada Nayrobi ee Kenya u rarayo magaalada Muqdisho. Safaaradda Maraykanka, ayaa qoraal ay soo saartay waxay ku dedafaysay war ay faafisay idaacadda VOA, laanteeda Afka Soomaaliga oo […]